के म मासिक अन्तरालहरू चलाउन सक्छु?
सायद आज त्यहाँ कुनै यस्तो केटी छैन जुन राम्रो हेर्न चाहँदैन, सधैं आकर्षक, पतला, आकर्षक हुन। यो सबै प्राप्त गर्न, तपाईंलाई निरन्तर शारीरिक प्रशिक्षण, खेलहरू चाहिन्छ। एक उदाहरण खेल्ने खेल हो। यो प्रकारको शारीरिक गतिविधिले कुनै प्रारम्भिक प्रशिक्षण, गोला बारुदको आवश्यकता पर्दैन। तपाईलाई आवश्यक छ tracksuit र आरामदायक स्टोर्स।
कुनैपनि खेलको रूपमा, दौड्दा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, स्थिरता र प्रणाली। तर कसरी हुन, यदि केटी मासिक आधारमा आउँछ भने, के तिनीहरूसँग चलाउन सम्भव छ? यस मुद्दाको नजिकको नजीक आउनुहोस्।
के यो मेनुस्ट्रोजनको समयमा व्यायाम गर्न सम्भव छ?
सबैभन्दा पहिला, यो ध्यान दिनुपर्छ कि त्यस्ता दिनहरूमा एक महिलाले शरीरमा विभिन्न परिवर्तनहरू गरेका छन् जुन सामान्य अवस्था र भलाइलाई असर गर्न सक्दैनन्। त्यसोभए, मस्तिष्कको समयमा, रक्तचापमा बारम्बार परिवर्तनहरू, मांसपेशिहरु मा कमजोरी, कमजोरी, भावनात्मक भावनाहरू छन्। यो सबै सामान्य प्रशिक्षण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ।
यदि हामी मेडिकल बिन्दुबाट मासिक अन्तरालहरू चलाउन सम्भव छ भने हामी कुरा गर्छौं कि अधिकांश कुरामा त्यस्ता प्रकारको व्यायामको लागि कुनै विरूद्धता छैन। एक अपवाद, सायद, केहि स्त्री रोगहरु हुनसक्दछ , जसमा शारीरिक बहिष्कारले छोटो छोटो छ। त्यस्ता परिस्थितिहरूमा, चाहे अवधी हुँदा यो सम्भव छ सम्भव छ कि डाक्टरले निर्णय गर्दछ जुन यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
मेनुस्टोरेशनसँग दौड्न के लागी उपयोगी हुन सक्छ?
पश्चिमी वैज्ञानिकहरूबाट आयोजित महिला संग लामो अध्ययन र अन्तरवार्ताको बेला, यो फेला पर्यो कि शारीरिक क्रियाकलाप, विशेष गरी चलिरहेको, मनुष्यको समयमा पनि यसको पाठ्यक्रमको सुविधा लिन सकिन्छ। तथापि, नबिर्सनुहोस् कि यस दिनको दिन सामान्यतया कमजोर हुन्छ, त्यसैले ती तीव्रता र प्रशिक्षणको अवधि कम गर्न छोटो छ, छोटो दूरी छान्नुहोस् र प्रति घण्टा 1 घण्टा भन्दा बढी छैन।
यो कहिलेकाहीँ दौडिएको बेलामा: मास्टस्ट्रोजनको बेला वा यसको अगाडि?
प्रायः, केटीहरु जुन एक सक्रिय जीवनशैली को नेतृत्व गर्न को लागी आदी हो र लगातार एक विवाद मा व्यस्त छ, प्रश्न उठ्छ कि यो मासिक धर्म को पहिलो दिन मा सीधा दौड संभव छ कि।
सम्पूर्ण कुरा यो हो कि यो मासिक धर्म को शुरुआत हो, एक नियम को रूप मा, कि अधिक दुखाइ र रक्त को कमी संग कमाई। यो अक्सर प्रायः उत्तेजना को पहिलो दिन खींचने संग असहज संवेदना, जो केवल खेलहरु संग हस्तक्षेप गर्दछ। यसैले, सबै भन्दा आवश्यक यो खातामा यो तथ्य लिनको लागि आवश्यक छ। यदि एक केटी बेइमानी महसुस गर्छ भने, टाउको दुखाइ र चक्कर लाग्ने हुन्छ, यो उस समयमा दौडिने भन्दा राम्रो हुन्छ।
किनकी यो सम्भवतः मासिक भन्दा पहिले चलाउन सम्भव छ भने, त्यसपछि मेडिकल पेशामा कुनै विसंगति छैन। सम्झनु भनेको केवल एक चीज हो कि भौतिक क्रियाकलापको नतीजा यो तथ्य हो, मासिकवृद्धि अपेक्षित मिति भन्दा 1-2 दिन अघि सुरु हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा, चक्र विफलताको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छैन किनभने, यस मा कुनै पनि कुनै रासायनिक छैन। यो तथ्य तथ्यले वर्णन गरेको छ कि दौडको परिणामको रूपमा, गर्भाशय myometrium को अनुबंधता आंशिक रूपमा बढेको छ, यसैले मासिक धर्म रगत सामान्य भन्दा पहिले पहिले जारी गर्न सकिन्छ।
प्रायजसो केटीहरूले एक प्रश्न सोध्छन् कि यो बिहानको बिहानै दौड्न सम्भव छ कि छैन। यो उल्लेखनीय छ कि उनीसँग उनको लागि सबैभन्दा सुविधाजनक समय छान्ने अधिकार छ। एकै समयमा, यो ध्यान दिनु आवश्यक छ कि शारीरिक लोड शरीरमा अधिक सजिलै बिहान मा दिइएको छ, र अन्तिम कार्य दिन पछि होइन।
यसैले, यदि केटी आफै मासिक संग अपेक्षाकृत राम्रो लाग््छ, तब खेल खेल्छ, र विशेष मा चलिरहेको छ, उसलाई लाभ हुनेछ। तर कुनै पनि मामलामा, तपाईंको शरीरलाई शारीरिक तनावमा बेवास्ता नदिनुहोस्, यदि कुनै दिइएको समयमा केटी, सतावटको शिरमा, दबाबको बिरुवा, चक्कर आउँछ।
गर्भको संरचनाको विशेषताहरू
PMS को लक्षण
गर्भाशय को लुकोप्लाकिया - यो रोग कस्तो खतरनाक छ, यसलाई कसरी पहिचान गर्न र यसको उपचार गर्ने?
गर्भपात पछि पुनर्वास
एएफपी र एचसीजी
Endometrium को हाइपरप्लास्टिक प्रक्रिया
Colpitis - महिलाहरु मा लक्षण र उपचार, सबै प्रकार को रोग को उपचार को सर्वश्रेष्ठ तरिका
Spikes संग जिनेकोलजी मालिश
योनि बाट गन्ध
अपमानजनक लक्षणहरू हटाउने औषधीहरू रजोनिवृत्तिसँग उत्तम औषधिहरू हुन्
हिप संयुक्त लोक उपचारको आर्थरोजिसको उपचार
रूसमा केन्याका दूतावास
एक नाजुक ठाउँ मा जेनिफर लोपेज मा एक चमकदार कन्सर्ट पोशाक पोशाक फट!
ओवनमा बेक्ड कालीफ्लवर
स्टाइलिश महिलाको जाडो जैकेट
देशमा फूल फूल र फूलको बेड
Kvasshenye aubergines - savory नाश्ता को तैयारी को लागि स्वादिष्ट र असामान्य व्यञ्जनहरु
किम कार्दाशियन र पेरिस हिल्टन
विवाहको लागि आकर्षक प्रतियोगिता
Sedum - रोपण र हेरविचार
पारा जहरीली को लक्षण
चर्ची मा घर - नुस्खा
जिउँदो चिकन कस्तो सपना देख्छ?
बच्चाको नापमा लिम्फ नोड्स
आहार बर्मर्मल - हप्ताको लागि मेनु
कस्मेटिक्स प्रयोग गर्ने 13 रहस्य, जुन तपाईंले थाहा भएन
स्टीभ वन्डर र म्याडोनाले बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार-2016 मा प्रिंसको मेमोरीलाई सम्मान गरे
दालचीनी - राम्रो र खराब
किम क्याट्राल उनको युवा र अहिले
स्प्रिंगमा टुलिप्स रोपण